opharetha wethu oyinhloko mobile, okuyinto kancane poprizhat amanani yamakholi abadlali kanye nemithetho isiRashiya, uzama isinxephezelo senkingeni yezimali, bephikelela anikeza izinkonzo ezihlukahlukene premium kumakhasimende ayo. Ngokuvamile ngisho esiqotho endleleni zidingeka. Abantu abaningi ubhekene nesimo lapho imali isuka akhawunti. Babe sebeba isikhathi eside futhi kanzima ukuze sithole ukuthi kungani. Njengoba sekuyiminyaka kulesi simo, awufuni ukwazi ukuthi cisha zonke izinsiza Beeline.
Ngokomthetho ekhona amalungelo umthengi, kuba - okungukuthi umthengi - kumele ngokunembile Ukwaziswa wonke manipulations ezenzeka nge-akhawunti yakhe, okubalwa kuzo umakhalekhukhwini. Kodwa ngokuvamile yalesi sizathu is ukunganakwa opharetha amaselula. Wonke amasevisi Beeline uxhuma imodi yokuhlola mahhala, azisa SMS isikhokhelo sika.
Amasevisi axhunyiwe isikhathi esithile, ngokuvamile amabili amasonto noma inyanga, bese unikele ikhasimende ukukhubaza kubo ngokuthayipha ikhodi ethile. Lokhu futhi aziswe isikhokhelo ku-SMS kuqala. Azikho izaziso ngaphezulu. Yiqiniso, phakathi nalesi sikhathi e okumatasa abantu ukuwukhohlwa ukuthi udinga ukuvala amasevisi test. Futhi uyazi ukuthi unakho amanye amasevisi, emva imali ikhishwe esiKhwameni akhawunti. Ubizwa kakhulu kusimangaze lokhu, uqala ukuxhumana opharetha, ukuthola ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa Beeline ngenhlonipho kodwa ngokuqinile uthi, "unecala, you khuza you tshela okufanayo, futhi ongatjhejisisiko, lutho kungenziwa." Posokrushayutsya ukuze uthole enye uhlobo amasevisi kuvaliwe, kodwa imali namanje angabuyeli kuyo. Yilokho sonke iqhinga. Akumangalisi ukuthi le ndoda yabe Useqala ukucabanga indlela ukuvala wonke amasevisi Beeline. Futhi ungasebenzisi noma imaphi amasevisi.
Uma usuvele Uxhuma amasevisi Beeline, uhlu kubo kungatholakala ngokufunda Ukudayela * 110 * 9 #. Ngalesi inombolo uthola ku-akhawunti yakho siqu. Futhi uma iya kusayithi Beeline, singasijabulela porukovodit amasevisi axhunyiwe kusuka lapho. Le ndlela muhle kubantu ojwayelene-inthanethi futhi ezihlukahlukene izicelo efonini, ngamanye amazwi, ngobuchwepheshe eziphambili. Khona-ke kungenzeka ukuba ngenkuthalo ukulawula ukubukeka ukukhubaza izinkonzo ezithile. Kulokhu, asikho isidingo ucabange indlela ukuze uvale wonke amasevisi Beeline.
Kusalokhu enye ingxenye ababhalisile kungukuthi ngobuchwepheshe isihambile, ukuthi akunjalo? Ungashayela inamba dlala 0611 maphakathi inkonzo bese ucela ukuthi Bamnquma zonke namasevisi axhunyiwe. Ngaphambi abasebenzi isikhungo, lokho kuyoba luyadingeka ukuze kufakazelwe ukuthi ungumnikazi wangempela ishayela SIM khadi. Ukuze wenze lokhu, buza imibuzo embalwa, izimpendulo lapho kuphela owazi umnikazi we inamba ebhalisiwe. Isisebenzi ngokuvumelana nesicelo. By endleleni, ngale ndlela, kuba nesikhathi nice: phakathi izikhathi ungasho ukuthi ucabangani mayelana Beeline inkampani kanye namasevisi ahlinzekwa. izingxoxo zocingo ezilotshwe izikhungo. Ngakho ukuthi umbono ngeke cishe eze ekhanda. Ngisho vimbela yesevisi ngokungena Ukudayela * 111 # bese iya kumenyu into yokuqala. Kodwa asikwazi qiniseka amaphesenti ayikhulu ukuthi Uzokwenza into elungile.
Kunenye Impendulo yombuzo kanjani ukukhubaza wonke amasevisi Beeline - uxhumane nendawo eseduze yesevisi isikhungo. Futhi kukhona ukuxhumana ngqo consultant ukuxazulula zonke izinkinga. Ngesikhathi esifanayo ungakwazi abeke kuvinjelwe uxhumano service ngaphandle kwemvume siqu esikhathini esizayo. Babophekile ukwenza lokhu uma wenqaba, ungakwazi ukusongela ukumangalela kusevisi Federal. Le ndaba horror usebenza ngokuphelele.
Smartphone Micromax Canvas Turbo Mini: Ukubuyekeza nempendulo
Indlela ukufaka "Vayber" ukuze "iPhone 4": ubuqili, ezicashile ukufakwa, abasebenzisi iseluleko
Emakethe yezabasebenzi futhi inkinga umsebenzi eRussia